सांसदको आक्रोश मेडिकल कलेजमाथि, कलेज सञ्चालकको माथेमा प्रतिवेदनमाथि – Health Post Nepal
२०७६ जेठ २२ गते १६:१७
फाइल तस्बिर : समितिको बैठक
चिकित्साशिक्षामा देखिएका विकृति छानबिन गर्न गठित संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा बुधबार सांसद र कलेज सञ्चालकबीच दोहोर सवाल–जवाफ भएको छ ।
समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमिति र कलेजका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले कलेजहरूले मनपरी गरिरहेको आरोप लगाए । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अनशनमा रहेका वेला डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिविपरीत चिकित्साशिक्षा ऐनलाई टुंगो लगाएको समितिमा उपस्थित सञ्चालकहरू शुल्कको विषयलाई लिएर त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलमाथि नै खनिएका थिए ।
बैठकमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुरेशकुमार कनोडियाले माथेमा कार्यदलको गठनमै मेडिकल कलेजलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य लुकेको आरोप लगाए । कनौडियाले प्रतिवेदनमा विनाआधार शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लगाए । ‘कुनै आधार, विश्लेषणविना यति लाख भनेर तोकिएको छ, के आधारमा तोकियो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनले सरकारले तोकेको शुल्कमा कलेजहरूले पढाउनै नसक्ने भन्दै बढी शुल्क लिएको स्विकारे । मन्त्रिपरिषद्ले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकाभित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओपी पाण्डेले फ्याकल्टीको तलब बढाउनुपरेको, विद्यार्थी कोटा घटेकोलगायत कारणले शुल्क बढाउनुपरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका बाह्य परीक्षकहरूलाई होटेलमा राखेर खुवाउनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यालय तहको शुल्क मासिक ५० हजार पुगिसकेको अवस्थामा मेडिकल शुल्क त्योभन्दा कम तय गर्नु आश्चर्यलाग्दो विषय भएको उनले सुनाए ।
समितिमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सिइओ सन्तोषलाल श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल राजीव द्विवेदी, देवदह कलेजका अध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेलगायतले ४७ लाखको हाराहारीमा शुल्क लिएको स्विकारेका थिए ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कलेजका होस्टेलहरू मदिरा र लागुऔषधको प्रयोगस्थल भएको, जथाभावी विद्यार्थी भर्नादेखि परीक्षासमेतमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए । उनले गाँजा र मदिरामा लठ्ठिएर केटाहरू केटीको होस्टेलमा समेत जाने गरेको समेत भेटिएको बताए ।
‘कतिपय कलेजमा इन्ट्रान्स परीक्षा पास नभएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिँदो रहेछ ।’ उनले कलेजहरूका होस्टेलमा विकृति मौलाएको आरोप लगाए । ‘बजारभरिका छानिएका वाइनहरू होस्टेलमा खपत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा गएर कक्टेल लिने र कक्टेलले छाडेपछि होस्टेल जाने, यस्तो पनि हुन्छ ?’ ।
बैठकमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संसदीय उपसमितिले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका उजुरीहरू अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘कलेजबारे कम्प्लेन गरिरहेका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षाहरूमा नियतवश फेल गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।’
उनले विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘गलत भएको छ, त्यसैले अभिभावकहरू रुँदै आएका छन् । भोलि आफ्ना बच्चा रेस्ट्रिकेट नहोऊन् भनेर बेनामी उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने ।
भट्टराईले सरकारले तोकेका शीर्षकबाहेकको शुल्क लिन नपाइने बताए । उनले विश्वविद्यालयहरूले नै तोकिएको शुल्कमा पढाउन सकिने भनेर आधारसहित भन्नुपर्ने भन्दै तोकिएभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
‘तोकिएकै शुल्क लिनुपर्छ, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले सम्बन्धन खारेजीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।